Kala-sooc Mawduucyadaaga WordPress si fudud | Martech Zone
Khamiista, Noofembar 21, 2013 Douglas Karr
Waxaan raadinayey plugin ama koodh aan ku kala beddelo cinwaannada cinwaankeenna boggayaga at DK New Media inaad ku raaxaysato oo aad u labisato bogga guriga xoogaa. Dhibaatadu waxay ahayd inaan haysto mawduuc la dalbaday oo leh goobo gaar ah oo loogu talagalay khadka tagta iyo sharraxaadda goobta, mana aanan jeclayn inaan u kala jeexo wax ka beddelkan.
Si tan loogu sameeyo plugins iyo wax ka beddelka mawduuca waxay u baahan tahay adeegsiga cajiibka ah Advanced plugin Fields plugin leh Repeater Field Add-on - waa sidaan ugu samayn lahayn macaamiisha. Boggeena, in kastoo, badanaaba waxaan qaadnaa tuuryo iyo nuxurka koodhkan yar ayaa sidoo kale u shaqeeya!
Asal ahaan, waxaad uun galaysaa cinwaano badan oo duur ah oo aad ku kala soocdaa dabeecad yar (waxaan isticmaalaa astaanta "|"). Markaa waad isticmaali kartaa ficil-qabadka qarxa ee PHP kaas oo cinwaanada oo dhan geliya xarriiq kadibna u adeegsada PHP shaqeeda isku-shaandheynta isku-darka nidaamka, ka dibna soo bandhig natiijada ugu horreysa. Waxaad kaliya muujineysaa natiijada koowaad… habkan haddii aad kaliya hal natiijo weli si sax ah u soo bandhigi doonto!
Mawduuceena halka cinwaanka la soo bandhigay, waxaan kaliya ku bedeleynaa qoraalka cinwaanka lambarka soo socda:
Haddii aad rabto inaad soo jiidato, waxaad u gudbin kartaa tan a isbeddelka gaarka ah ee Google Analytics oo runti tijaabi cinwaannada cinwaankeedu ugu fiican yahay!
Tags: qarxiphpkala soocrogrog cinwaanshufflecinwaanka isku shaandheyntheme word